STI Myanmar University ၏ BA (Hons) ဂုဏ်ထူးတန်းဘွဲ့အား Scholarship သိန်း 50 နှင့် အခြားအထူးခံစားခွင့်များ ပေးအပ်မည့်အစီအစဉ် | Mizzima Myanmar News and Insight /* TA: Added on nov-22-2019 */
STI Myanmar University ၏ BA (Hons) ဂုဏ်ထူးတန်းဘွဲ့အား Scholarship သိန်း 50 နှင့် အခြားအထူးခံစားခွင့်များ ပေးအပ်မည့်အစီအစဉ်
“ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း BA (Hons) ဂုဏ်ထူးတန်းဘွဲ့ကို STI Myanmar University မှာ Scholarship သိန်း 50 နှင့် အခြားအထူးခံစားခွင့်များပေးအပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဘာလို့ တခြား University တွေကိုရွေးချယ်နေတော့မှာလဲရှင်။ STI Myanmar University ကသာ အကောင်းဆုံးသောရွေးချယ်မှုပါပဲ”
STI Myanmar University မှာ Business Management ဘာသာရပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး University of Bedfordshire, UK က ရွေးချယ်စရာ ဘာသာရပ်ကြီး ၃ ခုဖြစ်တဲ့ BA (Hons) Business Administration, BA (Hons) Accounting, BA (Hons) Accounting and Finance အစရှိတဲ့ ဂုဏ်ထူးတန်းဘွဲ့တွေကို ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း သင်ကြားရေးပုံစံများ၊ Industry Visit များ၊ Internship အစီအစဉ်များနှင့် အတူ ကျွမ်းကျင်ဆရာကြီး၊ ဆရာမကြီးများမှ စာတွေ့လက်တွေ့သင်ကြားပေးနေပါတယ်။
Scholarship ပေးအပ်မယ့် လူဦးရေ အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားတာဖြစ်လို့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေအတွက် 09 955 123 446 – 49 ကိုခေါ်ဆိုပြီး (သို့) [email protected] သို့ email ပေးပို့ကာ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
STI Myanmar University. Make the right choice.
STI Myanmar University မှ The 2019 Graduation Ceremony ကို ကျင်...
ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြု BEng (Hons) Electronic နှင့် Telecom ဂုဏ်ထူးတန...
STI Myanmar University ၏ အကောင်းဆုံး BEng (Hons) Civil နှင့်...
STI Myanmar University ၏ BEng (Hons) ဂုဏ်ထူးတန်းဘွဲ့အား...
Advanced Diploma in Business Management (ADBM) နှင့် Advanced...
Diploma in TESOL ဆိုရင် ကျွန်မရဲ့ ရွေးချယ်မှုကတော့ တစ်ခုထဲပါပဲ...